ORAMBE : Betsaka sahady ny trano dobo, betsaka ny mitady trano hifindrana
Manararaotra mihitsy ireo mpanera ankehitriny amin’ny fitadiavana trano noho ny hamaroan’ny olona mitady trano. 10 000 Ariary ka hatramin’ny 20 000 Ariary ny saran’ny fitsidihana trano kasaina hofaina na ‘droit de visite’. 12 janvier 2017
Rehefa raikitra kosa ny fifanarahana dia hofan-trano iray volana no omena ilay mpanera. Tsy manambitamby fa mampifilafila mihitsy izy ireo amin’izany.
Vao manomboka ny orambe dia betsaka sahady ny trano dobo eto Mahajanga. Indrindra ireo miorina amin’ny toerana iva. Mafy dia mafy ny firotsaky ny orana ka tsy ampy ny fivarinan’ny rano. Miandrona ny rano, miakatra ary miditra an-trano. Misy ihany koa ny tafo no mijora na avy amin’ny rindrina no miditra ny rano. Betsaka amin’izany ny fianakaviana sahirana satria sady simba ny entana no tsy ara-pahasalamana ny trano ka voatery mitady trano hafa hifindrana.
Araka ny nambaran’ny mpanera trano iray dia betsaka ny tinady noho ny tolotra ankehitriny. Tsy mampaninona ny olona ny mandoa hofan-trano lafolafo kokoa rehefa tsara toerana, hoy hatrany izy.
Betsaka ihany koa ny mpampanofa trano mampiakatra hofan-trano amin’izao asara izao.